intlambo eluhlaza okwesibhakabhaka
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguMaría Angélica
Iindawo ezinomdla: Umbindi wesixeko, iimyuziyam, iipaki, imbonakalo yomhlaba, imisebenzi yezandla, imidlalo kunye nezithuthi zikawonke-wonke. Uya kusithanda indawo yam ngenxa yobumelwane, ukuzola, indawo epholileyo, ukukhanya, kunye nentuthuzelo ngokubanzi. Indawo yam yokuhlala ilungile kumaqabane kunye nabahambi.
Sinikezela kuphela indawo yokulala ngaphandle kwesidlo sakusasa, kodwa iindwendwe zinikwa iti okanye ikofu eneswekile okanye izimuncumuncu. Asinaso isixhobo sokupheka, kodwa kukho i-microwave, iketile, ifriji kunye nazo zonke izitya onokuthi uzifune ngexesha lokuhlala kwakho.
Umbuki zindwendwe ngu- María Angélica
Iindwendwe zethu zinenkululeko epheleleyo yokungena okanye ukuphuma ngexesha elifunekayo, ngaphandle kwenkathalo ekufuneka bayithathe xa bengena okanye bephuma endlwini yethu, ukuthintela izilwanyana zethu zasekhaya ukuba zingaphumi ngaphandle. Mna nomyeni wam asisoloko sifumaneka ngokoqobo ekhaya, kodwa sisabela ngokukhawuleza kulo naluphi na umnxeba, nokuba kubukho bethu okanye ngokuphendula umnxeba ngexesha elifanelekileyo.
Iindwendwe zethu zinenkululeko epheleleyo yokungena okanye ukuphuma ngexesha elifunekayo, ngaphandle kwenkathalo ekufuneka bayithathe xa bengena okanye bephuma endlwini yethu, ukut…
UMaría Angélica yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vicuña